စွမ်းရည်:1000~ 1500kg / h
လျှပ်စစ်ပြောင်းအမှုန့်ကြိတ်ခွဲစက်ဆိုသည်မှာကြက်သားများအားကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းများကိုသေးငယ်သောအပိုင်းအစများအဖြစ် ခွဲ၍ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။. ငါတို့သည်သင်တို့၏ရွေးချယ်မှုအတွက်အစာကျွေးသောကြိတ်စက်အများအပြားကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ကျွမ်းကျင်သည်။ ဒီပြောင်းဖူးကြိတ်စက်ကို feed hopper ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။, ထိပ်အင်ဂျင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, အောက်ခြေအင်ဂျင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရဟတ်, ဆန်ခါ, အလုပ်လုပ်ပန်ကာ, အစာဖြန့်ဝေပိုက်, စသည်တို့. ပြီးတော့သိုလှောင်မှုအိတ်နဲ့သိုလှောင်တဲ့ဘင်ကိုဖောက်သည်တွေလိုလိုအပ်သလိုတပ်ဆင်နိုင်တယ်. အပြင်, ငါတို့သည်လည်းအစာကျွေးခြင်းပါဝင်ပစ္စည်းများကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရန်အခြားအလားတူစက်နှစ်ခုပေးပါသည်
1.ဒီကြက်ဘဲအစာကြိတ်စက်ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာရှိပါတယ်. အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများကိုကြိတ်ခွဲနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောဂျုံအဖြစ်, ပြောင်း, ဆန်, ပဲပုပ်, မြေပဲ, ပြောင်းဆန်သို့မဟုတ်အရိုးကဲ့သို့သောအခြားအစိုင်အခဲပစ္စည်းများ, အသားခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်စသည်တို့ကို.
3. ဒီပြောင်းဖူးကြိတ်စက်မြင့်မားသောထိရောက်မှုရှိပါတယ်, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်, တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်.
4. လျှပ်စစ်အစာကျွေးသောသံတူစက်ကိုငါးအစာတောင့်စက်ရုံတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်, တိရိစ္ဆာန်နှင့်ကြက်အစာကျွေးတောင့်စက်ရုံ, ဖိုက်ဘာ, မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆဘုတ်အဖွဲ့, စက္ကူထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း, စသည်တို့.
5. ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်အစာကျွေးသောစက်ကြိတ်စက်တွင်အပ်ကျွေးသည့်ဟော့ပုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, ရဟတ်, ဆန်ခါ, အကြမ်းပန်ရန်, အခန်းထဲနှင့်ဖြန့်ဝေစက်ကိုကြိတ်ခွဲ.
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများသည်ကြိတ်ခွဲနေသောအခန်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်သော Hopper မှတဆင့်မြန်မြန်သောအလှည့်သံတူဖြင့်ပြုလုပ်သည်. ကုန်ကြမ်းများကိုလျင်မြန်စွာသုတ်သင်ခြင်းဖြင့်အပိုင်းအစငယ်များထဲသို့လျင်မြန်စွာကွဲကြေသွားနိုင်သည်, ဓားဓါးဖြင့်တိုက်မိခြင်းနှင့်ထိုးနှက်ခြင်း, သွားပန်းကန်နှင့်မျက်နှာပြင်အပိုင်းပိုင်း. ထို့နောက်ကြေကွဲသောပစ္စည်းများကိုမျက်နှာပြင်အပေါက်များမှ ဖြတ်၍ ပို့လိမ့်မည်. မျက်နှာပြင်အပေါက်များမှ ဖြတ်၍ မသွားနိုင်သောကြီးမားသောအမှုန်များကိုပြန်လည်ကြေမွရန်လိုအပ်သည်.
corn လည်ပတ်မှုညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပြီးပြောင်းစက်ကြိတ်စက်ကိုအသုံးပြုပါ. ပြောင်းကုန်ပြီတစ်ခုချင်းစီကိုစက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး.
ownt စက်အတွင်း၌ရောအပြင်၌ပါရှည်လျားသောကာလအတွင်းသန့်ရှင်းပါ, စပါးကြိတ်သံချေးတက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆန်ခါကွက်ပိတ်ဆို့ခံရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်.
broken အကယ်၍ သူတို့ကျိုးပဲ့နေလျှင် (သို့) ပြင်းထန်စွာဝတ်ဆင်ပါကအပိုပစ္စည်းများကိုအချိန်မီပြန်လည်ပြုပြင်ပါ.
starts တြိဂံခါးပတ်၏တင်းကျပ်မှုကိုစလိုက်တိုင်းတိုင်းစစ်ပါ. ခါးပတ်၏အိုမင်းခြင်းကသံတူစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်.
☑ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် (၂၅ than ထက်မပိုသော ) ဒီပြောင်းစက်ကြိတ်စက်ပြီးနောက်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအလုပ်လုပ်သည်. မှတက်အပူပါ 60 ဒီဂရီ, ကဆောင်သောအိုမင်းခဲ့သက်သေပြနေသည်, ထို့နောက်စားသုံးသူများကဆောင်သောနေရာကိုအစားထိုးရန်သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ရပ်တန့်သင့်သည်.